थाइरोइडले बच्चा नजन्मन सक्छ : विशेषज्ञ डा. अमित शाक्य |
थाइरोइडले बच्चा नजन्मन सक्छ : विशेषज्ञ डा. अमित शाक्य
प्रकाशित मिति :2015-07-03 13:20:21
किशोरीहरूले थाइरोइड परिक्षण गर्नु एकदमै जरुरी छ । विशेषज्ञ डाक्टर अमित शाक्य भन्नुहुन्छ ‘महिलाले परिक्षण गराउनुपर्छ । किशोरीहरूले पहिलो महिनावरीपछि अनिवार्य रुपमा थाइरोइडको परिक्षण गर्नुपर्दछ ।’ प्रस्तुत छ महिला खबर डट कमले डा. शाक्यसँग गरेको कुराकानी ।
थाइरोइड भनेको के हो ?
थाइरोइड भनेको मानिसहरूको घाँटी बाहिरको भाग अगाडी पट्टि देखिने सानोे प्रकारको अंगलाई थाइरोइड भनिन्छ । थाइरोइड हामीले घाँटीमा बाहिरबाट हातले छाम्यो भने थाहा पाउन सकिन्छ । घाँटीको अगाडी शास फेर्ने नलिमा हात राख्यो भने पनि थाहा हुन्छ ।
अक्सर मान्छे टङ्गसिलसँग झुक्किन्छ । थाइरोइड भन्ने कुरा थाहा नपाएपछि टङ्गसिलको औषधि खाने गरेको पाइन्छ । त्यो पनि एन्टीबाइटिक । थाइरोइड घाटीको तल छालाको बाहिर पट्टि नै देखिन्छ । यो रोगको पूर्ण रुपमा लक्षण देखापर्न १० वर्ष लाग्दछ ।
यो रोग कुन उमेरका मानिसलाई लाग्ने गर्दछ ?
यो रोग जुनसुकै उमेरका मानिसलाई पनि लाग्न सक्छ । थाइरोइडले बच्चालाई पनि छोड्दैन । अक्सर थाइरोइड बच्चालाई आमाको पेटबाट सर्ने गरेको पाइन्छ । टङ्गसिल मुखको भित्र हुन्छ भने थाइरोइड मुखको तल बाहिरपट्टि हुन्छ । रुद्रधण्टीको तल हातले छानेर हे-यौँ भने वायाँ र वायाँपट्टि थाइरोइड थाहा हुन्छ । थाइरोइड निकाल्दा मान्छे ‘कोमा’ मा पनि जानसक्छ । त्यसपछि मान्छेको दिमागले काम गर्दैन । आवाज बदलिन्छ । शल्यक्रिया गर्दा यस्तो घटना कमै मात्रमा भएको पाइन्छ । यसको शल्यक्रिया पहिला नै सर्जनहरूले यसको जानकारी दिनुहुन्छ । शरीरको रिमोट कन्ट्रोल भनेको थाइरोइड हो ।
यदि मानिसलाई हाइपर थाइरोइड भएको छ भने जे पनि छिटो हुन्छ । मुटुको धड्कन बढ्ने, कपाल झर्ने, मान्छे दुव्लाउने, हात खुट्टा काप्ने श्वास प्रश्वासमा समस्या आउने, डिप्रेसन हुने, आत्तिने हुन्छ । त्यसपछि मान्छेहरू मुटु चेक जाँच गराउँछन् तर मुटुको रोग नै हुँदैन् । धेरैलाई यो रोगको बारेमा कम ज्ञान भएको कारण पनि यस्तो भएको हो । विस्तारै यो रोगको बारेमा मानिसलाई जानकारी हुँदै गएको छ ।
थाइरोइड घाँटीको भागमा मात्र हुन्छ कि शरीरको अरु कुनै अंगमा पनि ?
थाइरोइडले शरीरको सम्पूर्ण भागलाई नियन्त्रण गर्ने भएकोले यो रोगले घाँटीमा मात्र असर गर्दैन । सबै अंगहरूमा असर गर्दछ । थाइरोइड सामान्य खालको भयो भने घाँटीमा मात्र देखा पर्दछ । सामान्य भन्नाले थाइरोइडको इनफेक्सन मात्र हो । यदि थाइरोइडले हर्मोन नै उत्पादन गर्न सकेन भने त्यसपछि समस्या आउँछ । अथवा हर्मोन बढीमात्रामा उत्पादन भयो भने पनि समस्या आउँछ ।
क्यान्सर पछिको उपाचार कस्तो हुन्छ ?
थाइरोइडको क्यान्सर अन्य जस्तो भयानक हुँदैन । यदि क्यान्सर भयो भनेपनि त्यो मान्छे वर्षौ बाँचिरहन्छ । थाइरोइडको क्यान्सर अरु क्यान्सर जस्तो हुँदैन । हर्मोन परिर्वतन हुँदा मान्छेको शरीरमा सानोठुलो मासुको डल्ला आएको हुनसक्छ । तर त्यो सबै क्यान्सर भने होइन । यो रोगको परिक्षण एउटा सानो सुई हुन्छ त्यस बाट हामीले मासुको डल्लो परेको भागबाट तरल पर्दाथ निकाल्छौ । त्यसपछि परिक्षण गरिन्छ ।
यो रोग कसरी लाग्छ ?
विशेषगरी यो रोग महिलालाई लाग्दछ । थाइरोइडले हर्मोन उत्पादन गर्दछ । प्रत्येक महिना हुने रजस्वलाले गर्दा महिलाको हर्मोन परिवर्तन हुन्छ । रजस्वला हुँदा र गर्भवती अवस्थामा महिलाको शरीरमा थाइरोइडको मात्रा असन्तुलित हुन्छ । त्यसकारण यो रोग महिलामा बढी लाग्दछ । यो रोगले महिलालाई बढी आक्रमण गर्दछ । एउटा क्लिनिकमा एक दिनमा १० देखि १२ जनासम्म विरामी परिक्षणका लागि आउँछन् ।
थाइरोइड हुनबाट रोक्ने उपायहरू के के हुन सक्दछन् ?
यो रोग वंशाणुगत रुपमा पनि आउन सक्छ । आमालाई भयो भने छोराछोरीलाई हुन्छ । वंशाणुगत रुपमा आएको थाइरोइडको रोकथाम भन्दा पनि पत्तालगाउन नै गाह्रो हुन्छ । यसलाई समयमै परिक्षण गर्नु सबैभन्दा उत्तम उपाय हो ।
यसको उच्चरुप कस्तो हुन्छ ?
थाइरोइड धेरै प्रकारका हुन्छन् । हाइपो थाइराज्ममा थाइरोइडले काम गर्दैन । उदाहरणको लागि कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सामानलाई चलाउनको लागि ब्याट्री चाहिन्छ भने हाम्रो शरीरलाई संचालन गर्नको लागि पनि घाँटीको दायाँ बाँया दुईवटा ब्याट्री हुन्छन् । ब्याट्री कमजोर भयो भने हाम्रो सबै शरीर नै कमजोर हुँदैजान्छ । यस्तो हुनुलाई हाइपोथाइराइज्म भनिन्छ । यदि हाम्रो शरीरमा ब्याट्रीले काम गर्दैन भने त्यसलाई हामीले अर्को ब्याट्री राख्नु पर्छ । त्यसकारण हाइपो थाइराइज्म भएको मान्छेले जिन्दगीभरी औषधी खानुपर्दछ ।
शल्यक्रिया कत्तिको जोखिमपूर्ण हुन्छ ?
शल्यक्रिया ठुलै हुन्छ । फेरि अरु शल्यक्रिया जस्तो घाउ बनाएर गर्ने होइन । छाला मात्रै चिर्दा पनि थाइरोइड बाहिर आउँछ । शल्यक्रियापछि पनि यसको सामान्य दाग मात्र देखिन्छ । शल्यक्रियामा यदि गडबड भयो भने मान्छेको आवाज नै बन्द हुनसक्छ । हाम्रो घाँटीमा आवाजलाई नियन्त्रण गर्ने सानो नसा हुन्छ । यदि त्यो शल्यक्रियाको बेला काटियो भने आवाज बन्द र परिवर्तन पनि हुनसक्छ । यो कुरा शल्यक्रिया अगाडि नै सर्जनले जानकारी दिन्छ । यस्तो घटना एकदमै कममा भएको पाईन्छ । यसलाई अपवादको रुपमा लिन सकिन्छ ।
विशेषत यो रोग महिलालाई लाग्छ । अझ घर परिवारमा पहिला देखिनै आमा बाबुलाई छ भने महिलाले अनिवार्य परिक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ । किशोरीहरूले पहिलो महिनावरी पछि अनिवार्य रुपमा थाइरोइडको परिक्षण गर्नुपर्दछ । किशोरावस्थामा उनीहरूको हर्मोन पहिलो पटक परिवर्तन हुँदा परिक्षण अनिवार्य जस्तो हुन्छ । अर्को गर्भवती महिलाले थाइरोइडको परिक्षण गर्नु झनै अनिवार्य हुन्छ । यदि गर्भवती महिलामा थाइरोइड भएको छ भने गर्भको बच्चालाई सर्छ । यो सबै कुरा परिक्षण पछि नै थाहा हुन्छ । केटाहरूले पनि १४—१५ वर्षको उमेरमा एक पटक थाईरोइड परिक्षण गर्दा राम्रो हुन्छ ।
यो रोग लागेकाहरूको संख्या नेपालमा कति छ होला ?
यसको बारेमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सर्बेक्षण भएको छैन । सरकारले यसका रोगीको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको पनि छैन । हामीले क्लिनिक र अस्पतालमा आउने विरामीको संख्या हेर्दा ५ देखि ७ प्रतिशतमा यस रोगका विरामी फेला परेका छन् । धेरैजसो विरामीहरू टङ्गसिल भयो कि भनेर झुकिने गरेको पाइन्छ ।
डिप्रेसन हुन्छ भन्नुभयो । पहिला डिप्रेसनले थाइरोइड हुन्छ कि थाइरोइडले डिप्रेसन ?
डिप्रेसनले थाइरोइड हुँदैन, थाइरोइडले डिप्रेसन ल्याउनसक्छ । ब्यक्तिगत जिवनमा समस्या झेलिरहेका सबैलाई थाइरोइड हुन्छ भन्ने होइन । त्यस्ता मानिसले थाइरोइड परिक्षण गर्नुपर्दैन । यदि पहिले देखिनै डिप्रेसनको औषधी खाएको मान्छेमा थाइरोइड छ कि भनेर हेर्न मिल्छ । यो रोग पहिला आयोडिनको कमीले गर्दा लाग्दथ्यो । त्यसलाई हामी गलगाँड भन्दछौं । यसलाई रोक्नको लागी विश्व स्वास्थ्य संगठनले नुनमा आयोडिन राख्न शुरु ग-यो । थाइरोइडको हर्मोन बढाउन नुनमा आयोडिन राखिएको हो । आयोडिन विना थाइरोइडले हर्मोन उत्पादन गर्न सक्दैन ।
आयोडिनको कमी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बढी हुन्छ । पहिला—पहिला गलगाँड हिमाली र पहाडी क्षेत्रका मान्छेलाई बढी हुने गर्दथ्यो । कि त मरुभूमिमा बस्ने मान्छेहरूलाई हुन्थ्यो । त्यसकारण आयोडिनको कमी भएको क्षेत्रमा थाइरोइडका बिरामीहरू धेरै हुन्छन् । तर तराईमा आयोडिनको मात्रा प्रशस्त हुन्छ । त्यस्तै सुमन्द्रमा पनि आयोडिनको मात्रा अत्याधिक हुन्छ ।
गर्भवती महिलाले यसमा बढी ध्यान पु-याउनु पर्ने हो ?
गर्भवती महिलालाई हाइपो थाइराइज्म छ भने परिक्षणपछि आौषधी सेवन गर्नु अत्यन्तै राम्रो हुन्छ । गर्भवती महिलाले थाइरोइडको औषधी खाँदा कुनै असर पर्दैन । यदि थाहा भएन र उपचार गरिएन भने गर्भमा रहेको बच्चालाई यो रोग सर्छ । बच्चाको दिमागको विकासका लागि थाइरोइड हर्मोनको आवश्यकता हुन्छ ।
बच्चाको आफ्नै थाइरोइड हर्मोन विकास हुनको लागि १८ देखि २० हप्ता लाग्दछ । त्यसकारण बच्चाको दिमागको विकासका लागि आमाको थाइरोइड हर्मोनको आवश्यकता पदर्छ । यदि आमाकै थाइरोइड विग्रिएको छ भने र आमाले थाइरोइड दिन सकिनन् भने बच्चाको विकास हुँदैन । जन्मने बच्चा लाटो, -याले, लुलो, लम्वाई नबढ्ने, हातखुट्टा छोटो हुने र, पढाईमा शुन्य र राम्ररी बोल्न नसक्नु भनेको गर्भ अवस्थामा आमालाई थाइरोइड भएको कारणले गर्दा हुन्छ । महिलाले यो हर्मोन उत्पादन गर्ने औषधी सेवन गर्न अनिवार्य हुन्छ । अझ गर्भवती महिलालाई औषधीको मात्र बढाएर दिने गरिन्छ ।
यसबाट उत्पादन हुने हर्मोन आमा र बच्चा दुबैलाई पुग्छ । त्यसैले गर्भमा रहेको बच्चालाई कुनै असर नपारोस् भन्नको लागि थाइरोइड परिक्षणलाई अनिबार्य बनाईएको हो । यो औषधी प्रयोग गरेमा गर्भवती महिलालाई कुनै प्रकारको असर हुँदैन । यसको एउटा मात्र असर भनेको हड्डी खियाउने हुन्छ । त्यसैले पटक—पटक परिक्षण गर्ने र विरामीलाई क्याल्सियम दिने गरिन्छ । थाइरोइड खराब भयो भने गर्भपतन हुने खतरा अत्यधिक हुन्छ । यो अवस्थामा हाइपर थाइरोइड पनि हुनसक्छ । हाइपर थाइरोइडमा हर्मोनको उत्पादन बढी भएको हुन्छ । यसले पनि बच्चालाई हानी पु-याएको हुन्छ । यदि आमामा थाइरोइड धेरै उत्पादन भएको छ भने बच्चामा पनि बढी जान्छ । बच्चाको मुटुको धड्कन बढ्ने, दिमागको विकास छिटो हुने, बच्चा छिटो बढ्ने हुन्छ । त्यसकारण आमाको थाइराइज्मलाई रोक्नको लागि औषधी सेवन गर्नुपर्दछ । यो औषधी पनि गर्भवती अवस्थामा सेवन गर्न मिल्छ । थाइरोइड भएको महिलालाई गर्भ नरहने र बच्चा नै नहुनेपनि हुन्छ ।
थाइरोइडको विरामीले खाने खाना कस्तो हुनुपर्छ ?
थाइरोइड लागेको विरामीको लागि विशेष खाना हुँदैन । सँधै खाने घरको स्वथ्य खाना नै विरामीले खाँदा हुन्छ । यसमा ध्यान दिने कुरा हाइपो थाइराइज्म लागेका विरामीको तौल बढ्दै जाने र रगतमा कोल्ड स्टोर बढ्ने हुँदा चिल्लो पर्दाथ कम खानुपर्दछ । औषधी खायो भने समान्य अवस्थामा आउँछ । यो रोग लागेका विरामीको तौल नियमित राख्नुपर्दछ । चिल्लो कम खाने र व्यायाम गर्ने गर्नुपर्दछ । रोगको अवस्था हेरेर औषधी दिने गरिन्छ ।
थाइरोइडका लक्ष्यणहरू तत्कालै देखिँदैन । यसका लक्ष्यण देखिन पाँच देखि दश वर्षसम्म लाग्नसक्छ ।
यस्तो भएमा मान्छेको तौल बढ्ने,डाइटिङ गरे पनि तौल नघट्ने, कपाल झर्ने र सुख्खा हुने,रगतमा कोलस्ट्रोल बढ्ने, महिलाको महिनावारीमा गडबड हुने, गर्भपतन हुने,डिप्रेसन हुने,चिसो बढी लाग्ने र हातखुट्टा चिसो हुने आदि हुन ।
धेरै गर्मी लाग्ने,मुटुको ध्डकन बढ्ने,जति खाना खाए पनि नमोटाउने,तौल घट्ने, हात काँप्ने, आँखा दुख्ने, रिस उठेजस्तो देखिने, कपाल झर्ने र छिटो आउने , हातखुट्टा पोल्ने र महिलालाई बच्चा नहुने तथा गर्भपतन हुनसक्ने हुन्छ ।
थाइरोइड क्यान्सरका लक्ष्यणहरू
क्यान्सरका लक्ष्यणहरू थाइरोइड भएको धेरैपछि मात्र देखा पदर्छन् । यस रोगको क्यान्सर एकै पटक बढ्दैन, यो विस्तारै बढ्छ, थाइरोइड परिक्षण गर्दा सामान्य पनि देखिनसक्छ ,छाती भारी हुने र श्वासप्रश्वामा समस्या आउने, घाँटी ठूलो हुँदै जाने, सुतेको बेला घुर्ने,विस्तारै आवाज परिवर्तन हुने , मान्छे दुब्लाउने र घाँटीमा मासुको ठूलो डल्लो भएर आउने हुन्छ ।
ती मध्ये श्वासप्रश्वामा समस्या आयो भने थाइरोइडको क्यान्सर भएको बुझ्नु पर्दछ । यी सबैको उपचार हुन्छ । विरामी समयमै उपचारका लागि डाक्टर कहाँ जानुपर्दछ ।
प्रस्तुतिः अरुणा रायमाझी